Izinhlelo zokuguqula izithombe zibe amavidiyo - VidaBytes | I-LifeBytes
Izinhlelo zokuguqula izithombe zibe amavidiyo
U-Iris Gamen | 13/06/2022 22:31 | Izinhlelo
Uma udinga ukuguqula izithombe zakho zibe amavidiyo ukuze usekele amaphrojekthi akho edijithali, usendaweni efanele. Sizokhomba ezinye zezinhlelo ezingcono kakhulu zamahhala nezikhokhelwayo. Uzofunda amathuluzi angcono kakhulu wokunikeza izithombe zakho ithuba elingu-360-degree, okungeza ubuhlakani nokujabulisa.
Kokubili amavidiyo nezithombe zopopayi kuyizici ezimbili ezikhetheke kakhulu, njengoba ngesikhathi esifushane kakhulu bethula umlayezo ngendlela efanele ezithamelini zethu. Inqubo yokuguqula izithombe zibe amavidiyo, Kungaba inselele kwabaningi benu uma ningawasebenzisi amathuluzi athile kukho.
Okuqukethwe okubukwayo empilweni yethu yomuntu siqu, ngokusetshenziswa kwezinkundla zokuxhumana, kanye nasemsebenzini, kuyadingeka kakhulu uma kuzothinta izethameli ezahlukene ezingasibona. Yithi njengabadali, ngubani Kufanele sithinte lezi zithameli sisebenzisa izici ezisenza sihluke kwabanye.
1 Amathuluzi angcono kakhulu okuguqula izithombe zibe amavidiyo
1.1 Ividiyo ye-Adobe Spark noma i-Adobe Express
Amathuluzi angcono kakhulu okuguqula izithombe zibe amavidiyo
Kulesi sigaba, uzothola a Ukukhetha okuncane kokuthi yini kithi ezinye zezinhlelo ezinhle kakhulu zokuguqula izithombe zibe ividiyo emakethe. Azikho ezihamba phambili ngenxa yedizayini yazo yesixhumi esibonakalayo, kodwa futhi ngenxa yemisebenzi yazo eminingi nezinketho ezingasebenza ngazo futhi zizuze umphumela wekhwalithi engcono kakhulu.
Ividiyo ye-Adobe Spark noma I-Adobe Express
Njengoba sonke sazi, iphakheji ye-Adobe yaziwa phakathi kochwepheshe nabathandi bomhlaba wobuciko bezithombe, ongakha ngawo amalogo, amakhasi ewebhu, imiklamo yokuhlela, njll.
Elinye lamathuluzi angatholakala yi-Adobe Spark Video, a ithuluzi okulula ukulisebenzisa ongaguqula ngalo izithombe zakho zibe yividiyo. Futhi, ikuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso amavidiyo ngokungeza umbhalo, ulungise isikhathi sokudlala, ukhethe ukwakheka ngokwezifiso, njll.
Kufanele nje layisha isithombe sakho bese usifaka kusilayidi, hlela konke okuqukethwe, kokubili i-multimedia nombhalo. Okulandelayo kuzoba ukukhetha itimu yamaslayidi futhi uyivumelanise nesitayela sakho. Lungisa izikhathi, yenza ividiyo ngendlela oyifisayo futhi usuqedile.
elinye ithuluzi, umdali wevidiyo wesithombe ongasiza abaningi benu ukuthi baqoqe zonke izithombe zakho zezikhathi eziyintandokazi, ngesikhathi esisodwa. Lolu hlelo lwaziwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi, kulo, kuvunyelwe ukwengeza umculo, izithombe eziningana ngesikhathi esisodwa, amanye amavidiyo, njll.
Kufanele uvule uhlelo, bese ulayisha izithombe ozifunayo. Okulandelayo, uzokhetha isifanekiso noma amaslayidi ukuze wengeze lezi zithombe. Hlela izinto ezihlukene ngendlela othanda ngayo, ukuhlela, ukunqampuna, shintsha osayizi, njll.. Uma usukwenzile lokhu, engeza imibhalo uma ucabanga ukuthi kunesidingo bese ulanda.
Kudume kakhulu, kulabo abasebenzisi abafuna ukuguqula izithombe zabo zibe amavidiyo, futhi bangenza kanjalo ngemibhalo. Leli thuluzi eliku-inthanethi likuvumela ukuthi ulayishe kalula izithombe futhi uziguqule zibe ividiyo ngenhloso yokuba nomthelela emphakathini. Ungakwazi ukwengeza umbhalo, izifanekiso ngokwezifiso, imiphumela, izinguquko, i-InVideo iyithuluzi eliphelele kakhulu.
Kufanele nje ungene, khetha kuzifanekiso ezitholakalayo ezingaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu, layisha izithombe ofuna ukuguqula, engeza izakhi ezihlukene kanye noshintsho futhi, ekugcineni, landa ifayela ekuxazululeni okufunayo.
Uma ufuna ukuguqula izithombe zibe yividiyo kalula kakhulu, leli thuluzi le-inthanethi nemisebenzi yalo ehlukahlukene izokusiza. Ngesixhumi esibonakalayo esilula kakhulu, i-Animoto ngokungangabazeki iwuhlelo okungafanele luphuthelwe ochwepheshe abaningi emkhakheni wokuklama kanye nasemhlabeni wemultimedia.. I-Animoto inhlobonhlobo yokushintsha kanye namathuluzi ombhalo okuyisa ukudala kwakho ezingeni elilandelayo.
Layisha izithombe bese ukhetha isifanekiso esizifanela kangcono izidingo zakho. Bese, lungisa futhi uhlele lezi zithombe, zinqamule, uzinyakazise, ​​engeza izihlungi, njll. Yenza isithombe ngasinye sibe nesitayela esiyingqayizivele. Faka nemibhalo, uma ucabanga ukuthi iyadingeka bese ukhetha isitayela esenza okubhaliwe kugqame.
Uhlelo lokuhlela ividiyo olunemisebenzi ehlukahlukene yokuhlela eyisisekelo njengokusika, ukuhlukanisa, ukwengeza umculo, ukuvumelanisa, njll. Leli thuluzi, qaphela ukuthi linesivivinyo samahhala sezinsuku eziyisithupha kuphela. Phakathi kwabasebenzisi balolu hlobo lwamathuluzi, I-VideoPad ithole ukuduma ezikhathini zamuva nje ngenxa yokuphatha kwayo kalula nezinhlobonhlobo zezinketho.
Ikunikeza ithuba lokusebenza ngoshintsho namafomethi ahlukene angaphezu kwama-50, ongalayisha ngazo indalo yakho ezinkundleni ezifana ne-YouTube. Kuye ngenombolo nesisindo samafayela osebenza nawo, kungase kwehle ngezikhathi ezithile.
Simply Ngokuchofoza okumbalwa, uzokwazi ukwenza ividiyo yezithombe ku-inthanethi ngendlela elula kakhulu. Uma ukhetha leli thuluzi, uzokwazi ukudala amavidiyo kalula, uvele ulayishe izithombe zakho, uzihlele, uzihlele futhi uzenze opopayi.
Izinyathelo okufanele uzilandele ukuze uzuze umphumela wochwepheshe zimi kanje; chofoza okukhethwa kukho ukuze udale ividiyo entsha bese ukhetha izilungiselelo ezihlangabezana nezidingo zakho. Yengeza izigcawu bese uqala ukulayisha izithombe zakho. Lungisa amafayela ashiwo kanye nezilungiselelo ezitholakalayo. Khetha inketho yomphumela wesithombe bese uqala ukwenza izithombe zakho ziphile.
Njengoba sesibonile ngawo wonke amathuluzi, i-Clideo ingelinye ongaguqula ngalo izithombe zakho zibe amavidiyo. Uma uthola lolu hlelo, ungakwazi ukwengeza amafayela ahlukene ngesikhathi esisodwa, hhayi izithombe kuphela, kodwa nama-GIFS namavidiyo. Kuyinkundla ye-inthanethi yamahhala ngokuphelele, lapho kungekho olunye uhlelo lokusebenza olwengeziwe oludingekayo.
Layisha izithombe zakho eziyintandokazi, lungisa lawa mafayela ngokulandelana, wahlele ngendlela othanda ngayo, ungawanqampuna, uwasondeze, uwahlele, njll. Engeza iziqeshana zakho zomsindo ozithandayo, zilungise futhi Uma umphumela ukukholisa, ungangabazi isekhondi elide bese uqhubeka nokulanda.
Kulula kakhulu, inqubo yokuguqula izithombe zibe amavidiyo ngalezi zinhlelo esizishilo. Kufanele ucace ukuthi yiziphi izithombe ozosebenza ngazo futhi udale ividiyo ehlaba umxhwele. Khumbula ukuthi kuyadingeka ukwazi ukuthi yiliphi ithuluzi elivumelana kangcono nezidingo zakho nokuthi yiliphi ozizwa ukhululekile ngalo lapho usebenza.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Izinhlelo » Izinhlelo zokuguqula izithombe zibe amavidiyo
Uwavula kanjani amafayela we-CBR
Ngingayibuyisela kanjani imilayezo yeTelegram